२०७५ असार १८ सोमबार १८:३२:०७ प्रकाशित
भोजपुर, १८ असार । भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस भोजपुरमा उपभोक्ताहितका लागी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपाने र प्रमुख अतिथि भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा.रोहित कुमार श्रेष्ठको उपस्थितीमा भएको थियो । कार्यक्रम नेपाल सगैँ विभिन्न जिल्लामा उपभोग हुने वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, खान योग्य म्याद, कालोबजारी, लुकाछिपी, एकाधिकार, मुल्य भिन्नता लगायत विषयमा विद्यार्थीहरु मार्फत गाउँगाउँमा चेतना अभिबृद्धि गर्नका लागी आयोजना गरीएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उपभोक्ता मञ्च भोजपुरका उपाअध्यक्ष एकसन राईले उपभोक्ता अधिकार र कार्यन्वयनको. अवस्था विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार ढिलो न्याय न्याय हैन भन्ने सिद्धान्त बमोजिम उपभोक्तालाई सहज र छरितो सुनुवाई अधिकारको प्रत्याभुती गराउनका लागी राज्यले चुस्त दुरुस्त कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने र व्यापारीक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा कुनै असर परेको भए त्यस्तो असर विरुद्ध सुनुवाईपछि उचित क्षतिपुर्ती पाउने अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण निति २०६९ ले उपभोक्ताको हित रक्षा र स्वस्च्छ बजार कायम गर्ने दाहित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा उपभोक्ता हकलाई जनताको मौलीक अधिकारका रुपमा स्थापीत गरेको समेत उपाअध्यक्ष राईले जानकारी गराए ।
त्यस्तै भोजपुरमा पटक पटक अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रीएका सामग्रीहरु नष्ट गरीरहदा पनी व्यापारीहरु सचेत नभएको पाईन्छ । हाम्रो दैनीक जिवनमा प्रयोग हुने उपभोग्य सामग्रीको म्याद सदरमुकाममा ल्याईपुयाउदानै सकिएको हुन्छ, गाउँमा पुग्दा त झन हानिकारक भएर पुग्दछ । गाउँमा उपभोक्ताको हक अधिकारको वारेमा जानकारी नहुदा किन्दा पसलेले जस्तो दियो हामीले त्यस्तै उपभोग गर्ने चलन छ । व्यापारीहरुले सस्तोमा सामान किनेर मंगोमा वेच्न पाउदा खुशि छन, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र अवस्था पत्ता लगाउने प्रविधि वजारमा छैन ।
त्यस्तै कार्यपत्र उपर टिकाटिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि क्याम्पस प्रमुख डा. रोहित कुमार श्रेष्ठले उपभोक्ता र उपभोग्य सामग्री एकअर्काका परीपुरक हुन गुणस्तरयुक्त खाद्य पर्दाथ सेवन गर्नु नागरीकको अधिकार भएको बताए । यसका बारेमा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक मार्फत सचेत गराएमा, वजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएमा र उपभोक्ता र उत्पादक आफैमा सचेत भएमा समस्या समाधान हुने आँैल्याए ।
कार्यक्रममा क्याम्पसमा अध्ययनरत ४० जना विद्याथीहरु, प्राध्यापकहरु, नागरीक समाज भोजपुर, उद्योग वाणिज्य संघ भोजपुर, स्ववियु सभापती लगायतको उपस्तिथी रहेको थियो ।